के भने कुशल र रोहितले अमेरिकालाई हराएपछि ? «
के भने कुशल र रोहितले अमेरिकालाई हराएपछि ?
कुशल र रोहितको ब्याटिङ चल्दा नेपालले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा अमेरिकालाई पराजित ग¥यो । सम्हालएको ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका युवा ब्याट्सम्यान कुशल र रोहितले कीर्तिमान पनि बताएका छन् । दुवैले आउँदा खेलमा पनि टोलीका लागि अझै मिहिनेत गर्ने बताए ।
ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा सोमबार नेपालल अमेरिकालाई ५ विकेटले पराजित गर्दै सिरिजमा सुखद सुरुआत ग¥यो । २ सय ३१ रनको लक्ष्य नेपालले ४९ ओभरमा मात्र ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्दा नेपालले शानदार जित निकालेको हो । सिरिजको सुखद सुरुआत गर्ने क्रममा ओपनर कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । कुशल भुर्तेलले ८४ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा ९३ बलमा ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । युवा ब्याट्स म्यान कुशलले करियरकै पहिलो एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो अर्धशतक समेत बनाएपछि टोलीका लागि खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । आफू शतकबाट चुकेको भएपनि टिमको तीज निकै महत्वपुर्ण रहेको र त्यसमा नै खुसी रहेको बताए ।
सुरुआत राम्रो गरेको नेपालका लागि कुशलले पहिलो विकेटका लागि आसिफ शेखसँग ६६ रनको साझेदारी गरेका थिए । नेपाली क्रिकेटको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको कीर्तिमानी साझेदारी हो । तेस्रो नम्बरमा आएका रोहित कुमार पौडेलले ६२ रनको अविजित अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दै नेपाललाई जित तर्फ डोराएका थिए । यस क्रममा पौडेलले लगातार दोस्रो अर्धशतक पूरा गर्दा खुसी लागेको बताए । उनले सुरुआत अलि ढिला भए पनि अन्त्यतिर लयमा आएको बताए ।
यस्तै नेपाली टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ले नेपालको दुवै ब्याटिङ र बलिङमा नेपालको प्रदर्शन राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । खेलमा ब्याटिङ गर्न सजिलो देखिएपछि रन लिनलाई कठिन भएको प्रतिक्रिया कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दिए । घरेलु टोलीसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौती पूर्ण रहेको ज्ञानेन्द्रले बताए ।
सिरिजअन्तर्गत आजै नेपालले आयोजक ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । कठिन मानिएको टोलीविरुद्ध नेपालले नेपाली समय अनुसा दिउसो ४ः१५ बजे प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । लिग–२ को सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले घरेलु मैदानमा ओमानसँग दुई खेल खेलेको थियो । दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो । सोही कारण नेपाली टोली सुखद नतिजाको खोजीमा मैदान उत्रिनेछ ।
#कुशल र रोहित
च्यासल क्लबका १९ खेलाडीमा कोरोना संक्रमण
च्यासल युथ क्लबका १९ खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । खेलाडीमा कोरोना देखिएसँगै आइतबार
थ्री–स्टारविरुद्ध अन्तिम मिनेट सम्हालिन नसक्दा संकटाले जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो हार भोगको
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफको लगातार तेस्रो जित
विभागीय टोली एपिएफले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकाल्दा
‘ए’ डिभिजन लिग नवौं चरणका खेल हुँदै
१४ क्लबको सहभागिता रहेको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबारबाट नवौं चरणका खेल हुँदै छन्
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात
विभागीय टोलीत्रय त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपिएफ र बागमती प्रदशले आजबाट राजधानीमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री